Shina: Mety Iza Ary Izany Mandondona Ao Am-baravarako Izany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 6:27 GMT
Rohy sy lohateny avy amin'ireo tantara roa an'ny BBC amin'ny teny Shinoa hita ao amin'ny faran”ny lahatsoratra iray [zh] androany avy amin'ny blaogera Boy70 ao amin'ny Blogbus:
Miresaka momba ny Sinoa Tatsinanana iray mpanamory fiaramanidina ilay voalohany, izay taorinan'ny nisidinany avy any Shanghai nankany Los Angeles dia nangataka fialofana tamin'ny filazàny ny teany ho mpanao Falun Gong, ary ilay faharoa kosa dia mitantara ny tantaran'ny mpanao gazety Zan Aizong (昝爱宗) avy amin'ny gazety Hangzhou (中国海洋报) , gazety miorina ao Haiyang, izay voatazona tamin'ny 11 Agosoritra taorian'ny nanaovany tatitra mikasika ny faharavan'ny fiangonana iray tao amin'ny faritra Atsinanan'i Zhejiang ary koa nitsikera ny fanenjehan'ny fanjakana ireo kristiana. Andrasana ho ny 18 Aogositra ny famotsorana an'i Zan.
Ireo tranga roa ireo no tena mahatohina indrindra, noho izany hanohy ny fizarana vaovao momba azy ireo aho. Raha toa ka tsy afaka miditra amin'ilay vaovao mifandraika aminy ianao, azonao atao ny mampiasa proxy mba hijerena azy ireny. Tsy maintsy ambarako fa tsy ananan'ny BBC sy ny Reuters, toy ny media Tandrefana maro ihany koa, ny etika fototra maha-matihanina. Amin'ny maha-media azy ireo, mora tohina kokoa noho ny ankamaroany izy ireo. Ny ampahany betsaka amin'ny fisian'izy ireo dia ny fanabantiana ara-ideolojika. Fa, masontsika roa hafa ihany koa izy ireo ary afaka mahita mazava tsara ny lafy ratsin'ny firenentsika.
Araka ny tatitra tao amin'ilay tranonkala Shinoa mpanohitra any am-pitandranomasina, Boxun, nantsoin'ny polisin'i Hangzhou tamin'ny 4 Aogositra ilay mpitsikera ny ara-tsosialy [zh], nilazàna tsy hiala ao an-tanàna ary nalaina ny solosainy. Tamin'ny 10 Aogositra, nesorina tamin'ny asa maha-mpanao gazety azy izy ary nosamborina tamin'ny 11 Aogositra noho ny ”faneleezana tsaho sy fanakorontanana ny filaminam-bahoaka.” Mampifandray ny fisamborana an'i Zan amin'ny asa sorany, ny maha-kristianina sy ny maha Shinoa mpikambana PEN azy [zh] ny fanambarana iray taorian'ilay tatitra, ary mangataka tsy misy fepetra ny famotsorana azy, ny famerenana ny fitaovana solosainy ary ny famerenana azy indray ho mpanao gazety sy tomponandraikitra web-n'ny gazety Haiyang .
Anatin'ireo anarana efatra amby dimapolo napetaka tao amin'ilay fanambarana—izay ny ankamaroany dia mpanoratra sy mpikatroka malaza—no misy ilay mpikatroka ho an'ny ady atao amin'ny SIDA,Hu Jia (胡佳),izay matetika voatebaka ary vao haingana no namerina namelona ny blaogy MSN Live Spaces. Niblaogy tao amin'ny blaoginy Spaces manokana ny vadiny, Zeng Jinyan (曾金燕), nandritra ny volana roa lasa izay, momba ny fiainana ambany famoretana maharitra ataon'ny fanjakana.